Nofonjaina Noho Ny Fanaovana Gazety: Ny Momba Ireo Mpanangona Vaovao Voatazona Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Nofonjaina Noho Ny Fanaovana Gazety: Ny Momba Ireo Mpanangona Vaovao Voatazona Ao Myanmar
Voadika ny 06 Aogositra 2017 15:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Italiano, English
(Ankavia miankavanana) Kyaw Min Swe, toniandahatsoratry ny “Voice Daily”, Ko Swe Win, toniandahatsoratry ny Myanmar Now, Lawi Weng, zokiolona amin'ireo mpanangona vaovao ao amin'ny “The Irrawaddy”, Ko Aye Nai, zokiolona amin'ireo mpanangona vaovao ao amin'ny DVB ary Pyae Phone Aung, mpanangona vaovao ao amin'ny DVB. / The Irrawaddy
Ity lahatsoratra navoaka ity dia avy ao amin'ny “The Irrawaddy”, tranonkala iray tsy miankina ao Myanmar, ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Ny fisamborana ilay mpanangona vaovao sy mpanao fanadihadiana lalina, Ko Swe Win, tao amin'ny seranampiaramanidina Iraisampirenena ao Yangon ny harivan'ny Alahady 30 Jolay 2017 teo no nampiakatra vonjimaika ho dimy ny isan'ireo mpanao gazety voatàna am-ponja ao Myanmar teo am-panatanterahan'izy ireo ny asany, hatramin'ny Jona.
Amin'ireo dimy, i Ko Swe Win, toniandahatsoratry ny masoivohom-baovao “Myanmar Now” ho hany tokana tsy nenjehin'ny tafika—fa kosa, mpanaradia iray ny vondrona Ma Ba Tha izay voaràra no manenjika azy ho nandefa tao amin'ny Facebook lahatsoratra iray nanakiana ilay moanina tena tsy azo akifika amin'ny fitiavana tanindrazana, U Wirathu.
Efa nomen'ny Fitsaràn'ny Tanànan'i Maha Aung Myay ao Mandalay fahafahana vonjimaika i Ko Swe Win, fa ireo efatra mpiaramiasa aminy kosa mbola migadra.
Ireo fisamborana rehetra ireo dia mifandray mivantana avokoa amin'ny asan'irempanangona vaovao, mampitombo ny tahotra hisian'ny famoretana ireo media tsy miankina sy mampisalasala fatratra hoe sao manokatra toko vaovao amin'ny resaka fahalalahan'ny fanehoana hevitra ilay firenena.
Ko Swe Win, Toniandahatsoratry ny “Myanmar Now”
Gadra noho ny politika fahiny i Ko Swe Win, 39 taona, zokiolona amin'ireo mpanangona vaovao ao amin'ny “The Irrawaddy” hatramin'ny 2010-2012. Tamin'ny taona lasa, nahazo mariboninahitra avy amin'ny governemanta izy noho ny fanadihadiana nataony momba ireo fanararaotana nihatra taminà ankizy roa mpanampy an-trano niasa tamin'ny trano fanjairana iray tao Yangon. Ny Andininy faha-66(d) no anenjehana azy, taorian'ny fitoriana azy ho nandefa lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook naniratsira ny moanina U Wirathu, fitoriana nataon'i U Kyaw Myo Shwe, mponina ao Mandalay sady mpanaradia an'ilay moanina U Wirathu. Taty aoriana, ny Martsa 2017, niatrika fitoriana fanindroany i Ko Swe Win noho ireo fanehoankevitra natao nandritra ny resaka iray ho an'ny mpanao gazety momba ilay vesatra faritan'ny Andininy faha-66(d). Iny volana iny ihany, olona telo tsy fantatra anarana no nandrahona ilay mpanao gazety.
U Kyaw Min Swe, Toniandahatsoratry ny “The Voice Daily & Weekly”
18 taona no niasàn'i U Kyaw Min Swe, 47 taona, ho an'ny The Voice Daily ary amin'izao fotoana izao izy no toniandahatsoratra ao. Nosamborina niaraka taminy ilay mpanao tsikera an-gazety Ko Kyaw Zwa Naing, taorian'ny namoahan'ilay gazety an-tsoratra amin'ny fiteny ao Myanmar ny lahatsoratra iray izay mametraka fanontaniana momba ny politika ara-tafiky ny firenena sy ny dingan'ny fandriampahalemana. Izy roa ireo dia samy voampanga araka ilay andininy faha-66(d) amin'ny Laàna momba ny Fifandraisandavitra sy ny Andininy faha-25(b) amin'ny Lalàna momba ny Media, taorian'ny nametrahan'ny Lietnà Kolonely Lin Tun avy amin'ny Tafika ao Myanmar ny fiampangàna azy ireo tao amin'ny Biraon'ny polisy ao an-tanànan'i Bahan, ny 17 May 2017. Taty aoriana i Ko Kyaw Zwa Naing dia navotsotra. [FANAVAOZANA: ny 4 Aogositra i Kyaw Min Swe dia nafahana rehefa nandoa onitra.]
Lawi Weng, Zokiolona Mpanangona Vaovao ao amin'ny “The Irrawaddy”
Hatramin'ny nidirany tao amin'ny “The Irrawaddy”, folo taona lasa izay, Lawi Weng, 39 taona, no teny amin'ny lohalaharana—ary matetika mihitsy no eny ambava ady—amin'ny fitaterana ireo fifandiran'ny samy foko ao Myanmar. Tamin'ny taona lasa, notateriny ny momba ny fanafihan'ny Tandrefana Mpiaradia tany amin'ny fanjakàna avaratra ao Shan ary ireo fifandonana nifanaovana'ny Tafika Demaokratika Karen Benevolent sy ny tafika mpiandry sisintany nalahatr'i Myanmar tao amin'ny fanjakan'i Kachin. Ny 28 Jolay 2017, neken'ilay mpitsara nitarika ny fotoam-pitsaràna ny raharaha ny handoavany onitra ary nolazainy fa amin'ny fotoam-pitsaràna manaraka, ny 4 Aogositra, izy no hamoaka didy. [FANAVAOZANA: Tsy neken'ny fitsaràna ilay fanangonantsonia ho famotsorana ny voampanga.]
Ko Aye Nai, Zokiolona Mpanangona Vaovao ao amin'ny Democratic Voice of Burma (DVB)
Efa niasa nandritra ny 11 taona ho an'ny DVB i Ko Aye Nai, 52 taona, ela nihetezana tamin'ny fanangonana vaovao, ka nolaniany tany Chiang Mai, Thailand ny sasany tamin'ireo, fony mbola tany an-tsesitany ilay gazety. Izy, niaraka tamin'i Lawi Weng sy Ko Pyae Phone Aung, no voaheloka araka ny Andininy faha-17(1) amin'ilay Lalàna momba ny Fikambanana tsy Ara-dalàna izay efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany, nampangaina ho mifandray aminà vondrom-poko mitampiadiana, ny “Ta’ang National Liberation Army (TNLA)”, ary naiditra am-ponja ao amin'ny fonjan'i Hsipaw. Sazy hatramin'ny telo taona no miandry azy ireo. “Na penina iray maranitra aza tsy anananay akory hatao fitaovam-piadiana ,” hoy izy tamin'ny fakàna am-bavany voalohany natao azy. “Mety ho faty amin'ny fotoana rehetra izahay amin'ny fitetezana ireo kianja feno vanja milevina, na ho voatifitra. Manao sorona ny tenanay izahay ho an'ny asanay.”
Ko Pyae Phone Aung, Mpanao Gazety Mpanampy amin'ny Fanapariahana, DVB
Herintaona lasa izay i Ko Pyae Phone Aung, 24 taona, mpanangona vaovao, no niditra tao amin'ny DVB. Ny 11 Jolay 2017 no voalahatra ho fotoana voalohany hisehoan'ilay mpanao gazety amin'ny maha-mpandefa lahatsary azy, saingy ny 26 Jona izy no nosamborina, niaraka tamin'i Ko Aye Nai sy Lawi Weng tao Namhsan, teny an-dàlana avy nanao fanadihadiana ny lanonana fandoroana zavamahadomelina nataon'ny TNLA mba hanamarihana ny Andro Erantany nataon'ny Firenena Mikambana aho Fanoherana ny Fidorohana Zava-mahadomelina.